देशभर पहिलो र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या करोड नाघ्यो « प्रशासन
देशभर पहिलो र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या करोड नाघ्यो
१७ भाद्र २०७८, बिहिबार
काठमाडौँ। देशभर पहिलो र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या एक करोड ९२ हजार १६४ जना पुगेको छ ।
दुई करोड १७ हजारमध्ये ५४ लाख २४ हजार ८३६ जनालाई पहिलो मात्रा र पूर्ण मात्रा लगाउने ४६ लाख ६७ हजार ३२८ जना पुगेको छ । प्रतिशतका हिसाबले पहिलो खोप लगाउने १८ र दुवै खोप लगाउने १५.४ प्रतिशत छन् ।
गत वर्ष माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान उत्साहजनक ढङ्गले अघि बढेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि खोप लगाउने कार्यले झनै तीव्रता पाएको छ ।
कोरोना भाइरस र कोरोनाविरुद्धको खोप दुवै नयाँ भएकाले सुरु–सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत खोप लगाउन आनाकानी गरेका थिए । स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य व्यक्तिलेसमेत खोपबाट प्यारालाइसिस हुने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने भन्दै खोप लगाउन मानेका थिएनन् ।
तत्कालीन खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले सुरुसुरुमा नर्स, डाक्टरहरूले समेत खोपप्रति आशङ्का व्यक्त गरेर खोप नलगाएको जानकारी दिए । बिस्तारै सरकारले खोपबारे गलत भ्रमलाई चिर्दै खोपले मात्र कोरोनाविरुद्ध काम गर्न सक्छ भन्ने भावना ल्याएको जानकारी उनले दिए ।
कोरोनाको दोस्रो लहरपछि मानिसले कोरोनासँग लड्न खोप मात्र विकल्प भएको बुझेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले मानिस पूर्ण रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोपप्रति विश्वस्त रहेको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कोरोना खोपबारे आएका भ्रमलाई हटाउन अन्तर्क्रिया , जनचेतनालगायतका कार्यक्रम गर्नुपरेको बताए । उनले पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा कोरोनाविरुद्धका सबै भ्रम हटिसकेको बताए । सरकारले असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ जनतालाई खोप पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भन्दै गौतमले त्यसअनुसार काम पनि भइरहेको बताए ।
Tags : खोप
17 May, 2022 10:34 am
भरतपुर अपडेट : रेणुको अग्रता कायमै, जगन्नाथले पनि मत बढाए
काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार मेयर पदकी उम्मेदवार
17 May, 2022 10:13 am
टी-२० सिरिज : आज नेपालले युगान्डासँग दोस्रो खेल खेल्दै
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले आज युगान्डासँग दोस्रो
17 May, 2022 10:01 am
पोखरा महानगरपालिका : एकीकृत समाजवादीका धनराजले बढाए अग्रता
काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
17 May, 2022 9:31 am
ओलीको गृहनगर दमकमा गठबन्धनका थापा ८६९ मतले अगाडी
काठमाडौँ । झापाको दमकमा गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेका राप्रपाका